Abdirahman Hashi’s Story Chasing a mirage, trapped by traffickers - Telling the Real Story
Cabdiraxmaan wuxuu ku noolaa nolol farxad leh magaaladiisa uu ka dhashay ee Hargeysa, Soomaaliya. Wuxuu tabobar u samaynayay inuu sawir qaade noqdo wuxuuna rajaynayey inuu noloshiisa bilaabo. Wuxuu si gaar ah ugu dhowaa hooyadiis, oo ku dhiirrigelisay oo ku taageertay si kasta.
‘Hooyaday taas oo aan cid kasta ka jeclahaywax kastana ii samaysay waa qofka kaliya ee aan wax kasta u sheegto, waana qofka kaliya ee aan wydiiyo talo.’
"waxaan dareemayaa hooyaday inay naxayso hadii loo sheego in inankeedii la waayey,iyadoon ogaan inuu dhintay in uu nool yahay. Waalidna ma jecla incaruurtoodu marto jidkaa khatartaa iyo inay ku taageeraan inay sidaa sameeyaan."
Waxaa loogu ballan qaaday inuu safarka noqon doono mid dhakhso ah oo sahlan. Horeba lugtii hore waxay ka gudubtay, badweynta Yemen halkaa ilaa Suudaan, waxay keentay baaritaan dhab ah oo fiiqan. Dad badan oo rakaab ah ayaa ku dhintey doontii xamuul dhaafka ahayd taas oo awoodeedu ahayd 50 rakaab ah laakiin 200 ayaa saarnaa doonta.
‘Waxa jirtay meel hoose oo daboolan oo dabaqa hoose ah taas oo loogu talo galay in lagu kaydiy allaabta. Dadkii halkaas joogay dhammaantood waxay u dhinteen neefsashada kadib hal saac oo ay safreen (...) Shaqaalaha markabka ayaa ka baqay in dawlada Yemen ay soo qabato. Sidaa darteed, markii aan u dhownahay xeebta, dadkii ayaa laga soo saaray doontii. Qaar naga mid ahi waxay ku hafteen hirarka sababtoo ah may dabaalan karayn. ”
Safarkii labaad ee badda ee ku aaday Suudaan wuxuu ahaa riyo kale. Markabka ayaa lumay cuntadiina way ka dhammaadeen. Markii ugu dambeyntii ay gaareen xeebta Suudaan, waxaa loo gacan geliyey tahriibiyeyaal naxariis daran, oo arxan daran. Waxaa la saaray basas oo waxay ku bilaabeen wado dheer oo lamadegaan kulula. Ma aysan helin wax ay cunaan, kaliya biyo lagu qasay batrool ayey cabbaan, si looga hortago inay gaajoodaan. Liibiya, xisbigoodii waxaa weeraray burcad, waxaana loo kaxeeyay xero dadka ka ganacsada halkaas oo si xun loogu garaacay si ay ugu khasbaan qoysaskooda inay bixiyaan madax furasho.
“Qof walba waxaa loo sheegay inuu la xiriiro qoysaskooda. Waxaa loo sameeyey inay odhanayaan lug baa I jabtay iyo xabad ayey igu dhawaceen markay lacagta waydiisanayaan waa inaan siinaa war xun ”
Jacaylkii uu u qabay hooyadiis darteed, Cabdiraxmaan wuu diiday inuu u sheego inuu dhaawacmay, wicistii ka dib waxa garaacay tahribiyyaashii Markii lacagtii madaxfurashada la bixiyay, xerada waxaa si lama filaan ah u weerarey koox burcad ah. Cabdiraxmaan waa la afduubay mar labaad oo lagu amrey inuu bixiyo madax furasho. Ugu dambeyntiina wuxuu ku guuleystey inuu ka cararo kuwa silciyayaashii waxaana soo badbaadiyey booliska. Waxaa la galiyay xabsi ugu dambeyntiina waxaa loo soo bandhigay celin, kaas oo uu si mahad leh u aqbalay.
“Markii aan soo noqday, jacaylka qoyskayga ayaa i illowsiiyey murugadaydii oo dhan. Aad bay u faraxsanaayeen, gaar ahaan hooyaday. Waxay bilaabtay nolol cusub markii aan soo noqday. Mar labaad way faraxsan tahay ”
Cabdiraxmaan wuxuu hadda furtay istuudiyaha sawirle ah hooyadiisna waxay si xamaasad leh u taageeraysaa mashruuca. Waxaa lagu muujiyey khibradiisa argagaxa leh, wuxuu u sheegayaa kuwa qorsheynaya inay si aan caadi ahayn u safraan si ay ugu qaataan digniin tusaale . Wuxuu leeyahay wadadaasi waxay kaliya horseedaa dhimasho iyo silic.